भक्तपुर, ३० फागुन : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका प्रवक्ता तथा उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले गत वर्ष ९९२ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेकामा यस वर्ष भने ५७ वटा परीक्षा केन्द्र थप गरेको छ ।
त्यसैगरी, बोर्डले मंगलबारदेखि परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइ शुरु गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा गोप्य प्रेसमा कक्षा ११ र १२ को प्रश्नपत्र छपाइ शुरु भएको बोर्डकी प्रवक्ता सत्यालले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४०९:०३
सर्वसाधारणको चाप बढेपछि घुम्ती शौचालय संचालन !
अपराधमा संलग्न चारजना सार्वजनिक
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु १ घाइते !
“प्रचण्ड” पत्नी सिता ८ दिनदेखि अस्पतालमै !
देशको मुख्य ऐतिहासिक सम्पदा साततले दरबार खस्न थाल्यो, किन गएन यसप्रति सरकारको ध्यान ?